UE Boom 2, manandrana azy ireo ho anao izahay | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Fitaovana hafa, hevitra
Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nanatrika ny fampisehoana ny UE Boom 2. Mba hanaovana izany, ny bandy avy amin'ny Ultimate Ears dia nitondra anay nankany Andorra, ary nasehon'izy ireo taminay ny tombotsoan'ity gadget ity teo ambanin'ny lamba firakotra. Toerana aiza no tsara kokoa hanehoana ny fanoherana ny vovoka sy ny rano an'ny mpandahateny fanamafisam-peo vaovao Farany farany!
Ny UE Boom voalohany dia nampiseho ny asan'ny mpanamboatra manolotra vokatra matanjaka sy tsara kalitao, araka ny hitanao ao amin'ny fanadihadiana izay nataon'ny mpiara-miasa aminay avy any Actualidadgadget. Ankehitriny, rehefa avy nanandrana ny UE Boom 2, azoko lazaina fotsiny fa nahavita nanatsara be ny vokatra izy ireo, nahatratra kalitaon'ny feo manaitra fotsiny.
1 UE Boom 2, mpandahateny hoentina na aiza na aiza
2 Kalitaon'ny feo tsy azo ovaina amin'ny mpandahateny azo entina
UE Boom 2, mpandahateny hoentina na aiza na aiza
Ny fiheverana voalohany rehefa mizaha toetra ny UE Boom 2 dia tena tsara. Ho fanombohana ny vokatra dia toa matanjaka ankoatry ny fanadiovana ny kalitao amin'ny alàlan'ny mason-kodiny rehetra. Ny firakotra vita amin'ny fingotra izay manodidina ny fitaovana dia tena mahafinaritra ny mikitika, misoroka Ny UE Boom 2 miala eo an-tananao izy ireo na dia mando aza, teboka iray tsy tokony hotadidina. Ho fanampin'izany, ny endriny boribory dia manamora ny fihazonana ilay fitaovana, na eo aza ny lanjany 548 grama.
Ao amin'ny tapany ambony dia ahitantsika ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny mpandahateny, ary koa ny bokotra kely izay mahomby Ampifanaraho amin'ny fitaovana Bluetooth ny UE Boom 2. Ny fanalahidy fanaraha-maso dia miorina eo alohan'ireo mpandahateny, mamela ny volony hihodina na hidina haingana sy mora, tena ilaina raha eny amoron-dranomasina isika ary tsy te hikasika ny telefaona amin'ny tanana maloto. Aza adino fa ny UE Boom 2 dia afaka mandray azy rehetra. Ary farany manana ny ampahany ambany amin'ny mpandahateny izahay, izay misy ny seranan-tsambo USB micro hampihenana ny UE Boom 2 sy ny fivoahan'ny feo 3.5 mm.
Mazava be ny fehiny: Ny UE Boom 2 dia manana endrika tsara izay ahafahantsika, ohatra, mampifandray azy ireo amin'ny rano eny am-bisikileta, mamela antsika hitondra mozika na aiza na aiza. Fa manao ahoana ny endrik'ireo mpikabary Ultimate Ears vaovao? Efa nolazaiko anao fa tena tsara ilay feo.
Kalitaon'ny feo tsy azo ovaina amin'ny mpandahateny azo entina
Voalohany aloha, ny herin'ny mpandahateny an'ny UE Boom 2 dia nitombo 25% araka ny teo alohany. Izahay dia nanandrana karazana mozika samihafa ary ny fitondran-tenan'ny UE Boom 2 dia tena tsara tokoa, nanolotra feo mazava sy tsara kalitao.
Ny Bluetooth ambany fanjifana izay mampifandray ireo mpandahateny UE vaovao dia mahatratra 30 metatra. Mazava ho azy fa manan-kery ho an'ny faritra misokatra ity angona ity aorian'ny fitsapana ireo mpandahateny amina efitrano samihafa misy varavarana mihidy dia tsy nahatsikaritra fanodikodinana feo izahay.
Zava-baovao tena mahaliana no miaraka amin'ilay fanaraha-maso fihetsika; ohatra, rehefa manainga ny UE Boom 2 amin'ny tanana iray ary manome kitapo maivana amin'ny felatanan'ny tànana hafa eo amin'ny tapany ambony amin'ilay mpandahateny dia hiato kely ny filalaovana mandra-pikatrika ny tapany ambony indray isika. Ary amin'ny fikasihana haingana roa dia hampandrosoantsika ilay hira. Haingana sy mora.
Ankoatr'izay, ny bandy avy amin'ny Ultimate Ears dia namorona mahaliana fampiharana izay ahafahantsika mifehy ny asan'ny mpandahateny amin'ny alàlan'ny finday, mifehy ny haavon'ny bateria na ny habetsaky ny fitaovana, mampifandray telefaona maro miaraka amin'izay mba hilalaovan'ny tsirairay ny mozika tadiavinao. Azontsika atao koa ny mampifandray mpandahateny maromaro amin'ny tsipika UE Boom na ny UE Roll mba hihainoana ny mozika amin'ny stereo!
Misy antsipiriany mahavariana iray hafa miaraka aminy Fanamarinana IPX7 izay mamela ny UE Boom 2 hilentika hatramin'ny 1 metatra lalina mandritra ny 30 minitra. Izahay dia nanandrana ny fanoherana ny fitaovana amin'ny lanezy ary tsy nanome olana izany. Mazava ho azy, ao anaty rano dia tsy haneno izy ireo satria very ny signal bluetooth, na dia esorinao amin'ny rano aza ilay fitaovana dia hilalao indray ny mozika tsy misy olana.
Tokony ho tsaroana fa ny fonony manarona ny vokatra ateraky ny UE Boom 2 dia tsy maintsy akatona mafy mba tsy hidiran'ny rano, araka ny antenaina, fa raha raisinao tsara izany antsipiriany izany dia azonao atao tsara ny mandena ny mpandahateny eny amoron-dranomasina, oram-panala na oram-be tsy mandalo. Ny tsiambaratelo? Ny UE Boom 2 dia tsy manana faritra vy.
Ny bateria UE Boom 2 dia manolotra a fahaleovan-tena mandritra ny dimy ambin'ny folo ora Ary raha ampiantsika amin'izany fa maharitra roa ora mahery ny fiampangana feno dia mazava fa manana tadim-peo mandritra ny fotoana fohy ireto mpandahateny ireto. Vokatra mitandrina tokoa izay namela tsiro be teo am-bavantsika. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry andrana fitsapana isika mba hanatanterahana fanadihadiana lalindalina kokoa, amin'izay hasehonay anao ny tsiambaratelo rehetra momba ny UE Boom 2 manaitra.
Nandritra ny famelabelarana ny ekipa Ultimate Ears dia nilaza matetika fa ireo mpandahateny ireo dia mikendry tanora mpijery mitady hitondra mozika amin'izy ireo na aiza na aiza. Ary taorian'ny nanandramako azy ireo dia tsapako fa tsy marina izany. Marina Ireto mpandahateny mahatalanjona ireto dia natao ho an'izay te hankafy ny hirany ankafiziny eny an-dalana, tsy mila miahiahy momba ny toetr'andro na fianjerana tampoka.. Tia fanatanjahan-tena tafahoatra ve ianao? Ny UE Boom 2 no safidy tsara indrindra. Te hanana mpandahateny sasany ho any amoron-dranomasina miaraka amin'ny namanao ve ianao na hankafy ny kalitaon'ny feony eo ambanin'ny fandroana? Ny faritry ny UE Boom no vahaolana mety. Te handaha-teny fotsiny ianao? UE Boom 2 no vahaolana tsara indrindra azonao.
Ary raha raisintsika an-tsaina izany na dia amin'ny fomba ofisialy aza 199 euro ny vidiny, izao Amidinao any Amazon amin'ny vidiny 129.90 euro izy ireo, Raha mahita ny tombony sy ny mety ho izy dia toa ahy io amin'ny iray amin'ireo fanomezana mahagaga indrindra amin'ity Krismasy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » UE Boom 2, nosedrainay ireo mpandahateny tsy misy tariby tsara indrindra eny an-tsena
gruncho09 dia hoy izy:
Salama, inona no ifotorananao milaza fa izy ireo no tsara indrindra ??? Mbola tsy hitako fa manana codec APTX izy ireo ohatra hanatsarana ny kalitaon'ny audio bluetooth ... Misy zavatra tena ilaina amin'izao fotoana izao.
Mamaly an'i gruncho09
Vao haingana aho no nividy azy io ary namidy azy in-telo hatramin'ny farany ambony ary nampiasaiko tamin'ny habetsaky ny habeny ary adiny iray monja ny bateria, nampiasaiko tamin'ny iPad-ko tamin'ny Bluetooth aho .... lainga lehibe izany 15 ora izany
Tokony ho adala ianao vao hino fa haharitra 15 ora amin'ny habetsany farany ambony! Arakaraka ny habetsaky ny habetsaky ny herin'ny bateria no lany !!!
Plants War 2 dia manolotra fifangaroana lehibe eo anelanelan'ny MOBA sy ny RTS
Xiaomi dia mandefa ny smarwatch voalohany ho an'ny ankizy